Waa kuma Martin Vrijland muxuuna u qorayaa maqaallada? Martin Vrijland waa suxufi, qoraa iyo cilmi baadhe oo hadda leh shabakadda ugu weyn Nederlaand ee raadinta runta dhabta ah. Sanadkii 2012 ayuu shaqadii ka joojiyey isagoo ah maamulayaasha iibka caalamiga wuxuuna go aansaday inuu sameeyo cod ka duwan. Marka […]
Muuqaal cusub oo cad!
Femke Halsema waxay sameyneysaa banaanbax iyadoon rukhsad sharci iyo koox dhisme lagaraneynin 1,5 m
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 2 June 2020	• 10 Comments
Runtii way sheegatay, xalay kadib markii mudaaharaad aan lagaran karin oo kusaabsan Dam-biyoodka; Femke Halsema ee Op1: xaquuqda banaanbaxa waa xuquuq dastuuri ah. Marka uma baahnid rukhsad gabi ahaanba. Kuwani waa dhamaan figradihii dowliga ahaa dhamaanteenna waxaan nahay dad dabeecad wanaagsan maxaa yeelay saxaafada ayaa noogu horseeday inaan aamino in […]
Habka Dilka Boliska Minneapolis George Floyd Si Loogu Daayo Dagaal Sokeeye?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 1 June 2020	• 12 Comments
Dilkii nin madow ee George Floyd oo ay u gaysteen askarta booliiska Derrek M. Chauvin ee Minneapolis ayaa leh qodobo laga shakisan yahay oo muujinaya muuqaal ah in dagaal sokeeye si ula kac ah loo bilaabay. Waxay noqon laheyd mid aad u kooban in la yiraahdo waxaan la macaamilaynaa soosaar filim oo dabcan waxaan rabnaa […]
Dhawaq badan oo dheeri ah ayaa soo ifbaxaya in coronavirus-ka dhab ahaan loogu qaabayn lahaa shaybaar. Meeshii bilowgiisii ​​la iigu yeerayay kuwa loogu yeero kuwa khiyaameeya xaqiiqda ee Nu.nl, markii aan tilmaamay in fayrasyada noocan oo kale ah ay ka imaan karaan shaybaar, hadda waa isla warbaahinta guud ee soo sheegta […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 May 2020	• 5 Comments
Bilihii ugu dambeeyay, nus adduunka waxaa lagu toogtay cabsi aad u weyn oo ku saabsan cadowga coronavirus ee aan la arki karin. Intooda badani fikrad kama haystaan ​​sida warbaahinta iyo siyaasada, iyagoo la kaashanaya awoodda loo yaqaan (oo soo taagnaa tan iyo xilligii xuska), ay go'aamiyaan aragtida adduunka. Ku dhawaad ​​wax kasta oo aan aragno oo aan aaminsanahay ayaa midab leh […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 May 2020	• 15 Comments
Ma lihi iPhone sidaa daraadeed ma aanan awoodin inaan baarto, laakiin barta internetka ee Apple waa mid iska cad. Nasiib darrose, in yar ayaa akhriyaya shuruudaha iyo shuruudaha ka hor intaadan rakibin cusbooneysiin ama app, laakiin waxaad kaliya heli kartaa raad raadin ah oo lagu soo daray casriyeynta ugu dambeeyay ee 13.5 XNUMX. Hadaad iweydiso, […]
Donald Trump wuxuu ku ciyaaraa kataarad halka Rome ay gubto, sida Emperor Nero
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 4 June 2020	• 9 Comments
Taariikhda Rome ayaa dib loo qoray sanadihii ugu dambeeyay, maxaa yeelay waa in loo tixgaliyaa inay tahay nooc war been abuur ah oo Ruush ah oo la mid ah in Emperor Nero dab ku shubay Rome laftiisu oo harraad ka daawanayay. Si kastaba ha noqotee, la mid ahaanshaha barta twitter-ka ee Donald Trump ee hoose ayaa ah mid muhiim ah oo ereyada dhab ahaantii dib loo dhigay. Kuwa aan wali fahmin […]
Kumaan kun oo dad ah oo ku sugnaa Dam Square ayaa bixiyay mudaaharaad ama si iskiis ah George Floyd oo aan cidina ogayn?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 2 June 2020	• 14 Comments
Dibad-baxaasi shalay ka dhacay Dam Square Dam ee Amsterdam wuxuu u eg yahay tusaale mudaharaad ah oo mudaharaad lagu bixinayo kaas oo ay dawladdu ku shaqaalaysay koox Inoffizieller Mitarbeiter oo ka tirsan hayada sirdoonka. Muddo bilooyin ah, ma jiro qof reer Dutch ah oo ka hor ordaya inuu iska caabbiyo caabbinta coronavirus-ka sida xirida iyo mitirka iyo badhkaba, laakiin hal (qof walboo […]]
33ka daqiiqo ee soo socda, eeg Maurice de Hond, ninka ka dambeeya codbixinta ballaaran ee qaran ee aan "si buuxda u aamini karno". De Hond waxay ogaatay in daraasadaha qaarkood ay muujinayaan in qaanuunka hal mitir iyo badh uu yahay wax aan micno lahayn isla markaana coronavirusku ku fido marka hawadu liidato. Maurice dabcan si adag ayey ugu qanacsan tahay […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 21 May 2020	• 16 Comments
Haddii aad raacdid warbaahinta, dhibaatada ka jirta Nederland wax dhibaato ah kama jiraan marka laga reebo feyraska corona, kaasoo wali u eg sida bambeel waqti qarxa. Aaway saxaafadu markay tahay muujinta dhibaatada shaqsiyadeed ee ka dambeysa albaabada hore dad badan? Maaha taasi in ay adagtahay in la helo tirooyinka RIVM […]
"Dawladu waxay naga codsataa inaan sidan samayno waxaanan kaliya la socdaa 'Befehl ist Befehl'. Waa inaad bixisaa magacaaga iyo lambarkaaga aqoonsiga si aad ula socoto qofka aad la soo xiriirtay. Haddii aad tan sameyn weydo, ma gali kartid dukaanka, laakiin sidoo kale waad ku dukaamaysan kartaa khadka tooska ah ”. Waa hagaag […]
Wadarta booqashooyinka: 2.609.235
SandinG op Donald Trump wuxuu ku ciyaaraa kataarad halka Rome ay gubto, sida Emperor Nero
falanqeeyaan op Donald Trump wuxuu ku ciyaaraa kataarad halka Rome ay gubto, sida Emperor Nero
Martin Vrijland op Donald Trump wuxuu ku ciyaaraa kataarad halka Rome ay gubto, sida Emperor Nero